गित संगित क्षेत्र बाट बाँच्न सकिदैन् ; गायिका सुमित्रा कोइराला - KavrePress
गित संगित क्षेत्र बाट बाँच्न सकिदैन् ; गायिका सुमित्रा कोइराला
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २३, २०७८ समय: १८:३१:०७
काभ्रेपलाञ्चोक, विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण गित संगित क्षेत्रमा ठुलो असर गर्यो । कोरोना भाइरसमा केही कमि हुन थालेपछि फेरी सांगितीक क्षेत्र चलाएमान भएको छ । दिन प्रति दिन नयाँ नयाँ गित बजारमा आउने क्रम जारी छ । पछिल्लो समयमा सुमित्रा कोइराला गित संगित क्षेत्रमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । गाउन घुम्न मन पराउने गायिका आज भोलि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँले गएका धेरै गित बजारमा आइसकेका छन् भने कति गित आउने क्रममा छन् । प्रस्तुत छ नव क्षितिज साप्ताहिका लागी अरबिन्द्र गौतमले उनै गायिका सुमित्रा कोइरालासँग गरेको कुराकानी
आज भोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ नि ?
मेरो नयाँ गित बजारमा आएको छ । तारा झलमल र झम्के झुलि केटो फिलिली गित केही दिन अगाडी बाट सार्वजनिक भएको छ । गित सँग सँगै आफ्नै व्यक्तिगत काम तिर नै व्यस्त छु ।
तपाई गायन क्षेत्रमा कहिले देखी लाग्नु भयो ?
सानै उमेर बाट गीत संगीतले आकर्षित बनायो र बजारमा आएका लयहरु गुनगुनाउन मन लाग्यो, विद्यालयमा हुने विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रतक्ष्य लाईभ दोहोरिहरु तिर पनि गाउन थाले र बिस्तारै एल्बम निकाल्ने योजना भयो र गीत संगीतको यात्रा सुरु भयो ।
गित कस्तो होस् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
सकारात्मक र सबैले सुन्न सक्ने हुन जरुरि छ यसमा पनि हाम्रो गाउँ समाजमा र समुदायको कला संस्कृति झल्किने र यो संगै सबैले गुनगुनाउन सक्ने सदाबहार होस् जस्तो लाग्छ ।
तपाईं गित संगित बाहेक के गर्नु हुन्छ ?
म गित संगित बाहेक शिक्षण पेशामा आबद्ध छु । म सरकारी विद्यालयको माध्यमिक तहको अस्थायी शिक्षिका पनि हुँ ।
कलाकारहरु गित संगित बाट नै बाँच्न सक्छन् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
गित संगितबाट नै मात्र त बाँच्न अलि कठिन छ । तर पछिल्लो समयमा कति पए कलाकारहरुको मुख्य पेशा नै गित संगीत भएको कारणले विभिन्न कार्यक्रम, मेला, महोत्सवहरुमा कलाकारहरुको माग अनुसार दोहोरी साँझले अझ बढी स्थान दिने हो भने कलाकारहरुले आफ्नो जीवन यापन गर्न सकिन्छ ।
तपाईंको सबैभन्दा चर्चामा रहेको गीत कुन हो ?
गित संगीत त धेरै गरियो र कति पए गितमा नै चिनिएको थिए भने मलाई सुमित्रा कोइराला भनेर चिनाउने गीत घन्कियो मदलु हो र अहिले झम्के फुलि बाट झन बढि दर्शकहरुले चिन्नु भएको छ र लोक प्रियता कमाएको छु जस्तो लाग्छ ।
नेपाली गित संगीतमा धैरै नकारात्मक कुराहरु पनि आएका छन्, यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
गित संगितमा मात्र हैन जुन सुकै क्षेत्रमा पनि नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष हुन्छन् तर गीत संगीत मिडियाको नजिक र मिडियाले नै अगाडि ल्याउने भएकोले गर्दा यसमा नकारात्मक वा सकारात्मक कुराहरु छिटो देखिन्छ । तर गित संगितहरुमा सकारात्मक कुराहरुलाई बढी स्थान दिन पर्छ जस्तो लाग्छ ।
कसको प्रेरणाले गित संगीत क्षेत्रमा लाग्नु भयो ?
स्थानीय रुपमा हुने औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रम आमा बाबाको साथ हौसला आफन्तको माया र घर परिवारको साथ सहयोग नै मेरो गित संगीतमा लाग्ने मुख्य प्रेरणा हो ।
तपाईंको भाबि योजना के छ ?
मेरो जति पनि गित संगीत दर्शकहरुले मन पराई दिनु भएको छ । त्यो भन्दा राम्रो सिर्जनाहरु पस्किएर दर्शकहरुको मन जित्ने इच्छा चाहाना छ ।
दर्शकहरुको माया कतिको पाई राख्नु भएको छ ?
गित संगित क्षेत्रमा सबै भन्दा ठुलो नै दर्शकहरुको माया साथ र सपोर्ट नै हो । मैले समय अनुकुल मेरा भगवान रुपि दर्शकहरुलाई गित संगीत पस्केको छु जस्तो महसुस भएको छ र दर्शकहरुले मलाई यतिकै माया दिइ राख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ ।
तपाई लगायत तपाईको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनहरुमा पनि मेरो सिर्जनाहरुलाई माया गर्दै मेरो गायिका पनलाई के कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरि सल्लाह सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।